MACLUUMAADKA TARANKA LAB DOG LAB JARMAL JARMAL IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Lab Dog Lab Jarmal Jarmal iyo Sawirro
Tilmaamaha Gawaarida Gaaban ee Jarmalka / Labrador eeyaha Isku-dhafan ee Isku-dhafan
'Rocky waa seddex sano jir Ingiriis Lab / GPS ah. Waa 27 'marka la engegayo waana 80 rodol. Wuxuu bilaabay tababarka eey daaweyn ah lix bilood, si kastaba ha noqotee, wuxuu bilaabay inuu aqoonsado markaan ku dhici doono. Kadib waxaa loo diiwaan galiyay inuu yahay eeygeyga adeega. '
Jarmal Shorthaired Labrador Retriever
Shaybaarka Gaaban ee Jarmalku ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka iyo Labrador dib u habeyn . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% saafi ah ilaa 50% daahir ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaabno jiil badan .
imisa sano ayuu turkey noolaan karaa inuu ahaado
Naadiga Isku-dhafka Canine ee Mareykanka = Shaybaarka Gaaban ee Jarmalka
Naadiga Naqshadeeyaha Eeyaha Kaynta = Jarmal Shorthaired Labrador Retriever
Diiwaan Geliyaha Cunnada Caalamiga ah®= Shaybaarka Gaaban ee Jarmal
'Odin runtii waa eey dheellitiran. Isagu wuu u hoggaansan yahay aadanaha iyo eeyaha kale ... laakiin sidoo kale aad buu ugu kalsoon yahay ... wuu ku foorarsadaa isagoo diiwaangelinaya waxyaabaha. Waa 75 rodol, laakiin wuxuu jeclaan lahaa inuu noqdo eey dhab ah! Odin wuxuu door muhiim ah ka qaatay shaqadeena eyda hoyga ah maxaa yeelay aad buu isugu kalsoon yahay saaxiibtinimo. Eeyaha hoyga ayaa isla markiiba u geeya isaga. Waxaa jiray hal eey khaas ah oo ka argagaxay wax walba isla markaana ku falcelinayay gardarro .... Markii aan gurigiisa ku helay oo aan baray Odin, wuxuu gebi ahaanba beddelay jidadkiisa. Wuxuu raacay Odin meel kasta wuxuuna si dhakhso leh u bartay inuu dadka aamino. Odin runtii waa eey cajiib ah. ' Odin ku arag baakadka.
'Odin waa eey diirada saaraya. Wuxuu ku nool yahay Frisbee ... ama kubbadda haddii intaas oo dhan ay jirto. Wuxuu qaatay fasalo raadraac ah wuxuuna cadeeyay inuu yahay mid dabiici ah dhawaana wuxuu bilaabay Dock Quusitaanka iyada oo loo marayo eeyaha Splash, oo isagu isagu jecel yahay. Odin waa labo sano jir laga bilaabo Sebtember 2009. Aniga iyo seyga aan guursaday waxaan badbaadinay oo eey koriye ah ... sidoo kale waxaan lugeynaa oo eey la kulannaa shirkad maxalli ah oo fadhida xayawaanka, sidaas darteed had iyo jeer nolosheena waxaa ku jira tanno badan oo ey ah. '
'Kani waa Odin, Jarmal Shorthaired Labrador ah, oo lagu muujiyey halkan isagoo ah eey 3 bilood jir ah. Waa nin baashaal badan oo firfircoon. Hadda wuu weynaaday, wuxuu jecel yahay inuu isku dayo oo salaamo xitaa 80-lb. dherer.
'Kani waa sawirka shaybaarkayaga / Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka. Iyadu waa tamar sare, aad u daacad ah, Sanka weyn ee ugaarsiga. Isweydaarsigu wuxuu u eg yahay timo gaaban. Waxay leedahay cagaha webka, waxay jeceshahay dabaasha, jaakad isku dhafan-waxay leedahay mowjado yar dhexdeeda inta lagu jiro bilaha qaboobaha. Malaha eeygii ugu fiicnaa ee aan abid haysto.
Springer spaniel muqisho isku darka shaybaarka
'Kani waa Jock, waxaan ahay 1-sano jir Jarmal Gaaban oo Gaaban. Aabihiis waa Pointer Jarmal Shorthair ah oo hufan hooyadiisna waa shukulaato saafi ah Labrador Retriever. Isagu waa eey layaableh wuxuuna yaqaan in kabadan 20 tabaha, oo ay weheliyaan lo'da. Isagu waa eey la yaab leh waxaan u maleynayaa inuu yahay sharaxaad cajiib ah oo ku saabsan isku dhafka ugu fiican ee noocyadan. Waxaan mararka qaarkood dhahnaa wuxuu ku jiraa steroids maxaa yeelay aad ayuu u murqo badan yahay wax baruur ahna kuma lahan isaga (guntiga gaaban ee ku jira).
Ku mashxarad Shaybaarka Gaaban ee Jarmalka (Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka / Labrador eeyaha isku dhafka ah) 1 sano jir barafka.
Ku mashxarad Shaybaarka Gaaban ee Jarmalka (Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka / Labrador Isku-darka eeyga isku-darka) 1 sano jir ah milkiilaha iyo fardaheeda
Ku mashquul Sheybaarka Gaaban ee Jarmalka (Tilmaamaha Gaaban ee Jarmalka / Labrador eeyga isku dhafka ah) 1 sano jir
'Tani waa Shaun, saaxiibkeyga ugu fiican adduunka. Macaan, kalgacal, caqli badan, isku dheelitiran. Waxaan jeclaan lahaa inay jirto waligeed.
Eeg tusaalooyin dheeri ah ee Shaybaarka Gaaban ee Jarmalka
Sawirro Jarmal Gaaban oo Jarmal ah 1
iskuxirka adhijirnimada australia ee boston terrier
mini madow tri adhiyaha australia
ceel dibi Terrier shar pei mix